Eegga koowaad: Dell Inspiron Mini 10 (1018)
Haddii aad ka fekereyso inaad iibsato Netbook, waxaa laga yaabaa in Dell mini 10 uu noqon karo ikhtiyaar. Qiimo ahaan waa qiyaastii US $ 400, oo aad uga hooseeya asalka Acer Aspire One marka hore. Waxay ka badan tahay ama ka yar tahay (in ka yar in ka badan) oo u dhiganta Acer D255-2DQkk, oo caddaynaysa in noocyadan (1018) horeba ...
Acer Aspire Dell Mini My aragti ugu horeysay
Engineering, aragti ugu horeysay
Zagg, waa isku midka ugu fiican ee Ipad
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee la qabsiga iPad-ka ayaa ah kiiboodhka. Way jiri doonaan kuwo u caadeystay, laakiin bil kadib waxaan ku soo gunaanaday in sababahan ay ii diidayaan inaan sameeyo: Dhinaca kale, farahaygu aad bay u buuran yihiin, ku shaqaynta kumbuyuutarka ayaa igu adag. 25 sano kadib waan ku faraxsanahay koorsadayda qorista ...
Apple - Mac, tabo cusub
Waa maxay Teamviewer - Ugu fiican taageerada fog
Maalin kasta way fududahay in la siiyo taageero farsamo haddii aad ka faa'iideysato faa'iidooyinka ay bixiyaan xiriirka internetka iyo barnaamijyada marin u helka fog. Maqaalkani wuxuu sharxayaa waxa TeamViewer yahay iyo sida looga faa'iideysto kiiska isticmaalka. Dhibaatada: Farsamo yaqaan diiwaangelinta dhulka, oo ku yaal degmo leh waddooyin xun ...
Internet iyo Blogs, egeomates My
PCS miyuu u dhimanayaa dadka isticmaala CAD / GIS?
Maxay noogu kacday inaan miiska sawir gacmeedka ka soo saarno xafiiska the Miyaanay sawir qaadayaashu ku laaban doonin booskaas? Arrinta si guud ayaa looga hadlay, welina way saxan yihiin. Waan hubaa inaan aragno kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada ah sida xafiiska boostada ...
Cartografia, Geospatial - GIS, Internet iyo Blogs
Arimaha sare ee Acer Aspire One
Kadib sanad iyo badh oo aan ka shaqeynayay Acer Aspire One, sameynta CAD / GIS ee heerka tababarka, dhajinta, qaar ka mid ah naqshadeynta garaafka iyo baafinta, halkan waxaan ku soo koobayaa kuwa ugu muhiimsan. Si faahfaahsan waxaan uga hadlay afar dhibaato, laakiin hadda waxaan ku soo koobayaa afar kale oo dheeraad ah oo aan falanqeynayaa inay macno sameyneyso iyo in kale ...
Internet iyo Blogs, Video
dhibaatada 4: Acer Aspire One, ma soo diray in Datashow
Xaaladda kumbuyuutarrada Acer Aspire, isku darka si looga soo diro aragtida shaashadda illaa borojektar kormeeraha dibedda waa isku darka Fn + F5. Way dhici kartaa inayna wax jawaab ah bixin, oo markaad 200 qof ka hor marto, waa dhibaato weyn. Aan aragno sida loo xaliyo. Hadday dhammaantood ku jiraan ...
Acer Aspire ipad Xafiiska dilaaga ah
egeomates My, dhowr
TatukGIS Viewer… daawade weyn
Ilaa hadda waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican (haddii uusan ahayn kan ugu fiican) daawadayaasha xogta CAD / GIS ee aan soo arkay, bilaash iyo wax ku ool ah. Tatuk waa khad alaab ah oo ku dhashay Poland, maalmo yar uun ka hor ayaa lagu dhawaaqay nooca 2 ee tatukGIS Viewer. Daawadayaasha kale Haddii aan qiimeyno barnaamijyada bilaashka ah ee noocyada kale, ...
Acer Aspire ArcView Bentley Systems Dgn Dwg ESRI Google Earth KML GIS kala cayncayn ah My aragti ugu horeysay SHP
Geospatial - GIS, tabo cusub, aragti ugu horeysay
uDig, aragti hore
Kahor inta aynaan eegin aaladaha kale ee furan ee aagga GIS, oo ay ka mid yihiin Qgis iyo gvSIG, marka laga reebo barnaamijyada bilaashka ah ee aan horay isugu daynay. Xaaladdan oo kale waxaan ku samayn doonnaa Isticmaalka Fudud ee Internetka GIS (uDig), mid ka mid ah kuwa soo gala PortableGIS. Meesha uDig ka timaado waa dhisme ...
Acer Aspire Dgn Dwg GPS Grass GvSIG OS KML GIS kala cayncayn ah My aragti ugu horeysay QGIS
Geospatial - GIS, GvSIG, aragti ugu horeysay, uDig
Geofumadas: halkan ayaa noo dhexeeya
Toddobaadkan, ka sokow sugitaanka ilaaliye cusub oo carruurtayda ah, waxaan fursad u helay inaan la kulmo saaxiib ka socda baloogga oo ila soo xiriiray ka hor intaanan imaan waddamadan oo ii sheegay inuu doonayo wareysi ujeedo gaar ah leh. Aad ayaan ugu farxay markaan ogaado in dhowr saacadood markii aan duulay ...
Acer Aspire AutoDesk Bentley Systems blog KML egeomates My
Geofumed: 48 khadad madow iyo caddaan ah
Xiritaanka sanadkaan, oo ahaa dhadhammo badan oo la yaab leh, waxaan kaliya kuu rajeyn karaa farxad 2011 oo aan wax badan ka qaban doonno. Kuwa u akhriya balooggan wax ka badan 299 gelitaan, boostadani waa mid aan loo baahnayn, kuwa aan akhrin, ku dhowaad 50 khadadka ayaa qeexaya farshaxanka geosmiga raaxo. Teknoolojiyada GIS / CAD (8):…
Acer Aspire blog Dgn Dwg ESRI Google Earth GPS GvSIG OS GIS kala cayncayn ah egeomates My
egeomates My, Leisure / waxyi
Shirkigu map a la miiska Excel ah
Waxaan rabaa inaan ku xiro miiska 'Excel' khariidad qaab shp ah. Miiska waa la beddeli doonaa, markaa ma doonayo inaan u beddelo qaabka dbf, ama ha dhigin gudaha geodatabase. Leyli wanaagsan oo lagu dilo firaaqada fasaxan iyo habka loo socdo ArcGIS 9.3 ee Acer Aspire ...
Acer Aspire GIS kala cayncayn ah SHP
ArcGIS-ESRI, GIS kala cayncayn ah
3 dhibaato, Acer Aspire Mid ka mid ah: Mid ka mid ah oo muhiim ah
Ka dib shaqaynta, mid ka mid ah furayaasha ayaa u muuqda inuu ku dheggan yahay, si tartiib ah ayaan u riixaa mana qoro, waxay u baahan tahay cadaadis xoogan. Tag sida ay u xanaaqsan tahay inaad haysato fure sidan oo kale ah, kumbuyuutarrada caadiga ah way fududahay inaad iibsato kumbuyuutar cusub halkii aad ku hagaajin lahayd furaha, laakiin marka la eego laptop-ka tani maahan ...
Waxaan, Diiwaanka Land iyo Google Earth
Waxaan ka soo laabtay safarkeygii, inta u dhaxeysa cunnooyinka Creole, cadaadiska wareegyada isreebreebka Koobka Adduunka iyo qanacsanaanta shaqada, halkan waxaa laga soo xigtay weedho aan la ilaawi karin oo ganacsiga ka mid ah. La-taliyayaashu: - Soo dhaqso! -dhiska nadiifinta! Kartooniistayaasha: -Ufff !!! Goorma ayey bixiyaan? Qiimeeyayaashu: -Ma i soo xasuusiyaan… Tababaraha: -Shariidada daabacan! Kuwa ...
dhibaatada 2: Acer Aspire One: Ha isku xiro Skype
Kahor intaanan arkin sida loo xaliyo dhibaatada codka ee Acer Aspire One, hada waa inaan halgamo maxaa yeelay si lama filaan ah macquul uma aheyn inaan ku xiriiro Skype, si lama filaan ah. Maxaan u istcimaalaa Skype markii hore waxaan bilaabay sidii hiwaayad laakiin markaa waa inaan safar badan aadaa oo aan xaadiraa shaqada guriga ee caruurteyda habeenkii,…
gvSIG 1.9 RC1, diyaar u ah inay kala soo bixi
GvSIG 1.9 RC1 ayaa hadda diyaar u ah soo dejin, qaybinta musharraxa ee ugu horreysa ee la sii daayo (Musharraxa Siidaynta) laga bilaabo Dhismaha 1243 ee Agoosto 313. Soo dejintu muddo ayey qaadatay, maxaa yeelay bilowgii gvsig.org waxay ahayd mid aan shaqeynayn, halka laga soo dejinayo dhismayaasha, markaa nooca la heli karo markii la furayo iyo marka la fulinayo waxay u muuqatay fayl musuqmaasuq ah. ...
PC ugu badnaan, magazine ah
Bishii Agoosto ee Maximum PC aad ayuu u fiicnaa, xoogaa wuu ka qaalisan yahay kuwa kale ee heerkeeda ah ($ 9 Maraykanka iyo $ 12 dalal kale ah), inkasta oo isdiiwaangelintu ay qiimaheedu yahay $ 25 sanadkii oo keliya, oo leh 12 nooc. Ka dib markii PC Magazine uu tirtiray daabacaaddiisii ​​daabacanayd ee Ingiriisiga, waxaan bilaabay inaan cuno joornaalkan, guud ahaan ...
Acer Aspire majallado
Best of Micro Center
Shalay waxaan kahadlayay follic-yada MicroCenter, hada waxaan rabaa inaan sameeyo liistada waxa aan kahelay inta ugu badan ee la iibsan karo. Guud ahaan, qiimayaashu si aad ah uma hooseeyaan marka loo eego kuwa laga helo waddan Hispanic ah, laakiin noocyada iyo cusboonaysiinta ayaa ah. Qaar badan oo waxyaalahan ka mid ahi ma yimaadaan, ama ma ...
tabo cusub, safarka
Faahfaahin dheeraad ah oo Houston
Farqiga safarkan ayaa ah marka laga reebo tababbarka aan qaatay dhowr maalmood oo aan ugu beddelay fasaxyadayda, taasi waxay i siinaysaa wakhti aan ku booqdo saaxiibkay oo ka socda Google Earth, oo ku nool meel u dhow xarunta wixii la odhan jiray Compaq, haddana loo yaqaan HP. Halkan waxaan idiinkaga tegayaa xoogaa waxa dabayshu ahayd ...